News - Masks, ghọta ya site na ụkpụrụ
Masks, ghọta ya site na ụkpụrụ
Ka ọ dị ugbu a, ọgụ mba na-alụso oyi baa nke ọhụụ coronavirus bidoro. Dị ka "usoro nchebe mbụ" maka nchebe ọcha nke onwe, ọ dị ezigbo mkpa iyi ihe nkpuchi na-agbaso ụkpụrụ mgbochi ọrịa. Site na N95, KN95 ruo ihe nkpuchi ahụike, ndị mmadụ nwere ike ịnwe ntụpọ ụfọdụ na nhọrọ nke nkpuchi. N'ebe a, anyị na-achikota ihe ọmụma dị n'ọhịa iji nyere gị aka ịghọta nghọta nke ihe nkpuchi.
Kedu ihe bụ ụkpụrụ maka ihe nkpuchi?
Ka ọ dị ugbu a, ụkpụrụ ndị bụ isi nke China maka ihe nkpuchi gụnyere GB 2626-2006 "Ngwa nchekwa nchekwa iku ume nke onwe-priming filter type anti-particulate respirator", GB 19083-2010 "Nka na ụzụ chọrọ maka ihe mkpuchi nchekwa", YY 0469-2004 "Nka na ụzụ chọrọ maka ahụike ịwa ahụ ịwa ahụ ", GB / T 32610-2016" Nkọwapụta Nka na ụzụ maka Masks Nchedo kwa ụbọchị ", wdg, na-ekpuchi nchebe ọrụ, nchebe ahụike, nchebe obodo na mpaghara ndị ọzọ.
GB 2626-2006 "Respiratory Protective Equipment Self-priming Filtering Anti-particulate Respirator" bụ nke a kpọsara site na onye isi nchịkwa General nke Nlekọta Ogo, Nnyocha na Kwarantaini na Kọmitii Nlekọta Nlekọta Nlekọta Mba. Ọ bụ ụkpụrụ dị mkpa maka ederede zuru ezu ma tinye n'ọrụ na Disemba 1, 2006. Ihe nchebe dị na ọkọlọtọ gụnyere ụdị ihe niile dị iche iche, gụnyere uzuzu, anwụrụ ọkụ, igwe ojii na microorganisms. Ọ na-ekwupụtakwa mmepụta na nkọwapụta teknụzụ nke akụrụngwa na-echebe akụkụ iku ume, yana ngwongwo, nhazi, ọdịdị, arụmọrụ, na nhichapụ nhicha nke ihe nkpuchi uzuzu (ọnụ ọgụgụ uzuzu uzuzu), iku ume iku ume, ụzọ nyocha, njirimara ngwaahịa, nkwakọ ngwaahịa, wdg. chọrọ.
GB 19083-2010 "Nchọpụta Nka na Uche maka Masks Nchedo Ahụike" bụ nke Onye Isi Nlekọta Nlekọta Nlekọta Nlekọta, Nnyocha na kwarantaini na Kọmitii Nlekọta Nlekọta Mba, ma tinye ya na August 1, 2011. standardkpụrụ a na-akọwapụta ihe ndị ọkachamara chọrọ, nyocha ụzọ, ihe ịrịba ama na ntuziaka maka iji ihe mkpuchi mkpuchi ahụike, yana nkwakọ ngwaahịa, njem na nchekwa. O kwesịrị ekwesị maka ojiji na ahụ ike na-arụ ọrụ na gburugburu ka iyo airborne ahụ na-egbochi ụmụ irighiri mmiri, ọbara, aru mmiri, secretions, wdg Onwe-priming nyo ọgwụ na-echebe nkpuchi. 4.10 nke ọkọlọtọ ka akwadoro, ma ndị ọzọ bụ iwu.
YY 0469-2004 bụ “Nchọpụta Nka na ụzụ maka ịwa ahụ gbasara ahụ ike” bụ nke Steeti Nri na Ọgwụ Ọgwụ kwupụtara ka ọkọlọtọ maka ụlọ ọrụ ọgwụ wee mejuputa ya na Jenụwarị 1, 2005. standardkpụrụ a gosipụtara ngwa ọrụ teknụzụ, usoro nyocha, akara aka na ntuziaka. maka ojiji, nkwakọ ngwaahịa, njem na nchekwa nke masks ịwa ahụ. Standardkpụrụ ahụ kwuru na arụmọrụ filtration nke ihe nkpuchi ekwesịghị ịbụ ihe na-erughị 95%.
GB / T 32610-2016 "Nkọwapụta Nka na ụzụ maka ihe nkpuchi nchebe kwa ụbọchị" bụ nke Onye Isi Nlekọta Nlekọta Nlekọta Nlekọta, Nnyocha na Kwarantaini na Kọmitii Nlekọta Nlekọta Mba nyere. Ọ bụ mba m nke mba mbụ maka ndị na-echebe ndị nkịtị ma mejuputa ya na November 1, 2016. standardkpụrụ ahụ gụnyere ihe gbasara ihe nkpuchi, ihe ndị a chọrọ, akara njirimara njirimara, ihe ndị a chọrọ, wdg. , Ngosipụta nguzogide ngwụsị ume na nke ume, na nke ngosiputa adhesion. Ọkọlọtọ chọrọ ka ihe nkpuchi ga-enwe ike ịchebe ọnụ na imi n'enweghị nsogbu ọ bụla, na enweghị nkuku dị nkọ na ọnụ nwere ike imetụ aka. O nwere ụkpụrụ zuru ezu banyere ihe ndị nwere ike ibute ahụ mmadụ dịka formaldehyde, dyes, na microorganisms iji hụ na ọha na eze nwere ike iyi ha. Nchebe mgbe ị na-ekpuchi ihe mkpuchi.
Kedu ihe nkpuchi nkịtị?
Ugbu a, ihe nkpuchi a kpọtụrụ aha gụnyere KN95, N95, masks ịwa ahụ ọgwụ na ihe ndị ọzọ.
Nke mbụ bụ ihe nkpuchi KN95. Dị ka nhazi ọkwa nke mba ọkọlọtọ GB2626-2006 "akụkụ okuku ume na-echebe akụrụngwa onwe priming nyo-ụdị mgbochi-particulate respirator", masks na-ekewa KN na KP dị ka arụmọrụ larịị nke nyo mmewere. KP ụdị adabara nzacha mmanu mmanu ahụ, na KN ụdị adabara nzacha na-abụghị mmanu mmanu ahụ. N'ime ha, mgbe achọpụtara nkpuchi KN95 na sodium chloride, so na filtration arụmọrụ kwesịrị ịdị ukwuu ma ọ bụ hà 95%, ya bụ, filtration arụmọrụ nke na-abụghị mmanu mmanu ahụ n'elu 0.075 microns karịrị ma ọ bụ hà 95%.
Ihe nkpuchi N95 bu nkpuchi nkpuchi nkpuchi itolu nke NIOSH kwadoro (National Institute of Safety Work and Health). "N" pụtara na ọ gaghị eguzogide mmanụ. “95 ″ pụtara na mgbe ọ gụrụ a ọnụ ọgụgụ a kapịrị ọnụ nke pụrụ iche ule ahụ, urughuru ịta n'ime nkpuchi bụ ihe karịrị 95% ala karịa urughuru ịta n'èzí nkpuchi.
Enwere ihe nkpuchi na "Pin Okwu Mark"?
Na November 9, 2018, T / ZZB 0739-2018 "Onye Mgbapụta Mmanụ Mmanụ Ala" nke Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. wepụtara site na Zhejiang Brand Construction Association.
A na-ahazi akara ngosi ọrụ aka nke ọkọlọtọ a dịka njirimara arụmọrụ ngwaahịa, na-ezo aka GB / T 32610-2016 "Nkọwapụta Nka na ụzụ maka ihe nkpuchi nchebe kwa ụbọchị", yana GB2626-2006 "Self-priming Filtered particle Respirators", GB19083-2010 “ Protectionkpụrụ Nchedo Ahụ Ike dị ka Masks, US NIOSH "Masks Nchedo" na European Union EN149 "Masks Nchedo" na-ejikarị eme ihe na mpaghara nchebe iku ume na njikọta na nnukwu ihe ndị na-emepụta mmanụ (dị ka kichin na ebe a na-amịkpọ anụ). Thekpụrụ ahụ na-ekwu na arụmọrụ filtration nke mmanu mmanu karịrị 90%, ihe ndị ọzọ fọdụrụ na-agbaso ụkpụrụ A-larịị nke masks obodo na ụkpụrụ nke mkpuchi mkpuchi ọrụ mmanu na Europe na United States, na tinye ihe ndị dị elu maka ịchapu mmiri, nkwụsị iku ume, ihe ngosi microbial, na pH. Gbakwunye ihe achọrọ maka oge nkwụsịtụ oge.
E nwere ọtụtụ ihe nchebe na-echekwa KN90 \_ KN95 ọkwa na-abụghị mmanu mmanu na ahịa. Ihe nkpuchi ụdị KP na-enwekarị nguzogide dị elu, na ọmarịcha mma ha na nkasi obi ha bụ ụkpụrụ mkpuchi ihe mkpuchi ụlọ ọrụ, nke siri ike igbo mkpa ndị mmadụ na-adị kwa ụbọchị.
Kpụrụ nke ụkpụrụ maka ihe mkpuchi anwụrụ mmanụ na-arụ ọrụ dị mma na ahụike nke ndị mmadụ. Maka ọtụtụ ndị ọrụ kichin, usoro nke ọkọlọtọ a na-enyere aka ịhọrọ ngwa nchekwa kwesịrị ekwesị maka gburugburu ọrụ ha.
Mgbe ahụ, enwere ihe mkpuchi ịwa ahụ. Dabere na nkọwa nke YY 0469-2004 "Nchọpụta nka na ụzụ maka masks ịwa ahụ ọgwụ", ndị ọrụ ahụike na-ahụ maka ahụike "na-eyi ndị ọrụ ahụike na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi mwakpo, iji nye nchebe maka ndị ọrịa na-aga ọgwụgwọ na ndị ọrụ ahụike na-arụ ọrụ mmekpa ahụ, ma gbochie Masks ịwa ahụ ọgwụ na-agbasa site na ọbara, mmiri ahụ na splas splas bụ masks nke ndị ọrụ ahụike na-arụ ọrụ. " A na-eji ụdị nkpuchi a na gburugburu ahụike dịka ụlọọgwụ na-apụ apụ, ụlọ nyocha, na ime ụlọ ọrụ, ma kewaa ya na akwa mkpuchi mmiri, akwa nhicha, na akwa nkasi obi site na mpụga ruo n'ime.
Nhọrọ sayensi nke nkpuchi
Ndị ọkachamara kwuru na mgbakwunye na inye nchebe dị irè, itinye ihe nkpuchi ga-eburu n'uche nkasi obi nke onye nwe ya ma ghara iweta mmetụta na-adịghị mma dịka ihe egwu dị ndụ. N'ikwu okwu n'ozuzu, ka ọ dị elu nke ihe nchebe nke ihe nkpuchi, mmetụta ka ukwuu na arụmọrụ nkasi obi ka ukwuu. Mgbe ndị mmadụ na-ekpuchi ihe mkpuchi na iku ume, ihe nkpuchi ahụ nwere nguzogide ụfọdụ maka ikuku ikuku. Mgbe mgbochi inhalation buru oke ibu, ụfọdụ ndị mmadụ ga-eche ọzịza, ume obi na nsogbu ndị ọzọ.
Ndi mmadu di iche iche nwere ulo oru na aru di iche iche, ya mere ha nwere ihe di iche iche choro maka akara, nchedo, nkasi obi, na imeghari nke ihe nkpuchi. Fọdụ mmadụ pụrụ iche, dịka ụmụaka, ndị agadi, na ndị nwere ọrịa iku ume na ọrịa obi, kwesịrị iji nlezianya họrọ ụdị nkpuchi ahụ. Na ebumnuche iji hụ na nchekwa, zere ihe ọghọm dịka hypoxia na nju anya mgbe ị na-eyi ha ogologo oge.
N'ikpeazụ, chetara onye ọ bụla na n'agbanyeghị ụdị nkpuchi ọ bụla, a ga-ejikwa ha nke ọma mgbe ejirila ya iji zere ịghọ ụzọ ọhụrụ nke ọrịa. Na-akwadebe ihe nkpuchi ole na ole ma dochie ha n'oge iji wuo usoro nchebe nke mbụ maka nchebe ahụike. Achọrọ m ka unu niile nwee ezigbo ahụike!
Dị ka ụlọ ọrụ
E guzobere Jiande Chaomei Daily Chemical Co., Ltd. na 1996. companylọ ọrụ ahụ bụ ụlọ ọrụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe na n'ichepụta ngwaahịa nchekwa iku ume. Ọ bụkwa anụ ụlọ mbụ na klas ndị ọkachamara na-acha uzuzu-na-egosi Chinese PPE ọkachamara emeputa nke masks. , Bụ otu n'ime ụlọ ọrụ izizi emeburu ụlọ a. Companylọ ọrụ ahụ nwere mpaghara ụlọ mita 42,000. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike mmepụta kwa afọ nke ihe karịrị 400 nde masks ọkachamara. Na 2003, dịka ntuziaka nke National Development and Reform Commission, North Korea nyere naanị nchekwa maka ụlọ ọgwụ Beijing Xiaotangshan, Hospitallọ Ọgwụ Ditan, Inlọ Ọgwụ Na-ahụ Maka Ọrịa Na-efe Ọrịa Beijing, PLA General Logistics Department, 302 na 309 -lọ Ọgwụ China-Japan na National Ihe nkpuchi ihe nchekwa ihe mberede “SARS”
Iji lụsoo ụdị oyibo a nke ọrịa coronavirus, North Korea na United States ume ngwa ngwa chetara ndị ọrụ gbara ya gburugburu ugboro atọ ụgwọ ọrụ ha iji nye ihe ikike kachasị ike maka ndị agha na-alụ ọgụ n'ihu. E toro ya na akụkọ CCTV News Network!
Otuto maka ụdị "akara ngosi akara" dị otu a, ma nwee obi ụtọ maka ndị agha na-agba mgba n'ihu. Ndị obodo ahụ na-ewusi ntụkwasị obi ha ike, na-enyere ibe ha aka, na-akpọkọta ndị mmadụ niile, ma na-egbochi ma na-achịkwa ọrịa ahụ. Anyị ga-emeri n'ọgụ a megide ọrịa ahụ.
N'oge na-adịbeghị anya, Institutelọ Ọrụ Na-ahụ Maka Standkpụrụ Zhejiang nke Standardization gosipụtara ngwa ngwa karịa mba 20, mba ọzọ, mba, ụlọ ọrụ na ụkpụrụ mpaghara maka mkpa nke mgbochi ọrịa na ụkpụrụ njikwa gburugburu ihe mkpuchi mkpuchi ahụike, uwe nchekwa ahụike, ngwa nchekwa ahụike, wdg, maka zụta na ibubata na ọ ọbụna ụlọ ọrụ na-eduzi ka ha mepụta ihe mkpuchi na ngwaahịa nchekwa ndị ọzọ metụtara ya iji nye nkwado nkwado ndị ọkachamara, na-enyere aka rụọ ọrụ nke ọma na mgbochi ọrịa na njikwa ngwaahịa, ma dozie nsogbu nke ụkọ ọgwụ.